Zviroto Zvinoreva - Dudziro & Duramazwi Rinojeka
Zvinorevei kurota nenyoka?
Zvinorevei kurota mwana?
Zvinorevei kurota tsvina kana tsvina?
Zvinorevei kurota dhiabhori kana madhimoni?
Zvinorevei kurota varoyi nehuroyi?
Zvinorevei kurota uchichema?
Zvinorevei kurota uchibaiwa kana kubayiwa?
Zvinoreva kurota nezve kuita weti
Zvinoreva kurota mazino kana kuti mazino ako anodonha
Zvinorevei kurota uchipfurwa kana kupfurwa?
Zvinorevei kurota kuti wadzokerana newawakarambana naye?
Zvinorevei kurota mvura?
Zvinorevei kurota kristaro yakajeka mvura?
Zvinorevei kurota mvura yakasviba?
Zvinoreva kurota pamusoro pemvura yakachena
Zvinorevei kurota nezve madandemutande?
Zvinorevei kurota wasps?
Zvinorevei kurota zvinyavada kana zvinyavada?
Zvinorevei kurota mawhale?
Zvinorevei kurota bhasikoro?
Zvinorevei kurota marara?
Zvinorevei kurota uchigeza?
Zvinorevei kurota mapete?
Zvinorevei kurota coronavirus?
Zvinorevei kurota makarwe?
Zvinorevei kurota kumakuva?
Zvinorevei kurota chokoreti?
zvinorevei kurota nemeno?
Zvinorevei kurota kuti mazino ako anodonha?
Zvinorevei kurota ma dolphin?
Zvinorevei kurota usina kupfeka?
Zvinorevei kurota nezvemari?
Zvinorevei kurota masitepisi?
Zvinorevei kurota pati?
Zvinorevei kurota zvipoko?
Zvinorevei kurota zvehondo?
Zvinorevei kurota hofori?
Zvinorevei kurota katsi?
Zvinorevei kurota zvikwekwe?
Zvinorevei kurota huku?
Zvinorevei kurota nehonye?
Zvinorevei kurota uchipatara?
Zvinorevei kurota masvosve?
Zvinorevei kurota uchizviita benzi iwe pachako?
Zvinorevei kurota mazai?
Iwe unofarira kuziva iyo kududzira and the zvinoreva zviroto zvako? Wati wambomira kuti ufunge nezvehusiku uhwo hunozvidzokorora kazhinji uye husingakutenderi kuzorora? Chii chiri kusaziva kuyedza kuratidza kwauri paunenge wakarara, uye tingaite sei dudziro chaiyo yemifungo yedu yehusiku?
Unogona kusazviziva, asi husiku huropi hwedu hunenge huchiri kushanda uye hunogona kurota kunyangwe zuva range richinetesa sei. Uyezve, kurota kwese kwatinako kwakasiyana zvachose, funga nezve zvinoreva zviroto uye kudzidza kududzira marongero ayo akaoma kunobatsira iwe kuti uzvizive iwe zvirinani zvirinani.
Kudzidza kwezvinoreva uye kududzira hope icho chinhu chakabatikana uye chakashamisa vanhu kubva pakutanga kwenguva. Nepo munguva dzekare kududzirwa kwezviratidzo zvekurota kwakatsvaga kutsvaga meseji, kubva muzana ramakore rechimakumi maviri nekuvandudzwa kwe psychoanalysis. kutitambudza pakati pevamwe.
Parizvino ndatenda ku vane mukurumbira wepfungwa kufanana nevakakurumbira Sigmund Freud, wechiFrench Jean Laplanche naJean-Bertrand Pontalis kana veSwitzerland Carl Gustav Jung kududzirwa kwekurota kwakaguma kuonekwa sechinhu chisiri chakakomba uye chave chirongwa chekiriniki. Kana iwe uchifarira musoro wenyaya, pano iwe une chinongedzo kune yangu yekuverenga bhaibheri uye vandinoda vanyori.
1 Tsvaga zvinoreva zviroto zvemahara muduramazwi redu
2 Yepamutemo kurota duramazwi: kududzira hakuchazove chakavanzika kwauri
3 Gadzira dudziro yehope uye uone kuti zvinorevei
4 Dudziro vs zvinorehwa nehope
5 Dudziro yeDoto muAkare
6 Chii chiri kurota?
7 Psychoanalysis uye kududzirwa kwaFreud
8 Iyo yekuongorora psychology yaCarl Jung
9 Duramazwi kududzira zvinoreva zviroto
10 Ndiri ani?
11 Ndeapi matanho ekurara
11.1 Chikamu I: chiveve nhanho
11.2 Chikamu II: kureruka kurara nhanho
11.3 Phase III: shanduko nhanho
11.4 Chikamu IV: rakadzika hope danho
11.5 REM yekurara chikamu
12 Zviroto zvakajairika
13 Zano rekurangarira hope zvakanaka
14 Zvinoreva zviroto
Tsvaga zvinoreva zviroto zvemahara muduramazwi redu
Mumitsara inotevera unogona kuwana rondedzero ye akaraira hope dzinoreva kubva kuAZ, kuti zvive nyore kwauri kushandisa webhu. Zvese izvi zviroto musanganiswa pakati pekuunganidzwa kwezvakakosha kurota zvakarapwa nevanyori vane mbiri uye vamwewo mipiro zvichibva pane zvakaitika kwandiri nezviroto zvandatambura uye zvandakaongorora nekudzidza zvakadzama kwemakore.
Icho chinyorwa chakazara kwazvo asi chinoenderera mukuenderera mberi kwekushanduka, Kana uine hope dzinokunetsa uye dzinozvidzokorora uye hazviratidzike mune rondedzero ndinokukumbira ndinyorere meseji kuburikidza nechikamu chekubata chewebhu uye ini ndichaferefeta nyaya yako uye ndowedzera iro hope kurondedzero kuitira kuti vamwe vashandisi vazive nezvazvo.
Yasvika nguva yekuti utsvage hope dzinokushungurudza. Pano iwe une rondedzero yakarongedzwa nearufabheti.
Zviroto zvinotanga naA
Zvinorevei kurota bhokisi?
Zvinorevei kurota mota, mota kana mota?
Zvinorevei kurota kuuraya kana kuuraya?
Zvinorevei kurota shamwari?
Zvinorevei kurota ngirozi?
Zvinorevei kurota nyuchi?
Zvinorevei kurota netsono?
Zvinorevei kurota nendege?
Zvinoreva kurota kuti dandemutande rinokuruma
Zviroto zvinotanga naB
Zvinorevei kurota slugs?
Zvinorevei kurota mazizi nemazizi?
Zvinorevei kurota pfuti dzichirira?
Zvinorevei kurota zvipembenene netupukanana?
Zvinorevei kurota uchitamba?
Zvinorevei kurota muchato?
Zviroto zvinotanga naC
Zvinorevei kurota nyoka?
Zvinorevei kurota banga?
Zvinorevei kurota uchidonhera munzvimbo isina chinhu?
Zvinorevei kurota magakanje?
Zvinorevei kurota kumakunguwo?
Zviroto zvinotanga naD
Zvinorevei kurota uchirwa kana kuita nharo?
Zvinorevei kurota uchitsvaga mari?
Zviroto zvinotanga naE
Zvinorevei kurota ex ex mukomana kana ex ex girlfriend?
Zvinorevei kurota nzou?
Zvinorevei kurota nezve nhumbu?
Zviroto zvinotanga naF
Zvinorevei kurota Facebook?
Zvinorevei kurota moto?
Zvinorevei kurota maruva?
Zvinorevei kurota michero?
Zvinorevei kurota hama dzakafa
Zviroto zvinotanga naG
Zviroto zvinotanga naH
Zviroto zvinotanga neni
Zvinorevei kurota mafashama?
Zvinorevei kurota kereke?
Zvinorevei kurota munhu asina kuvimbika kana kubiridzirwa?
Zviroto zvinotanga naL
Zvinorevei kurota shumba?
Zvinorevei kurota mapere?
Zvinorevei kurota madzvinyu?
Zvinorevei kurota mvura ichinaya?
Zvinorevei kurota labyrinth?
Zvinorevei kurota makiyi?
Zviroto zvinotanga naM
Zvinorevei kurota uchiuraiwa?
Zvinorevei kurota uchiuraya?
Zvinorevei kurota tsoko?
Zvinorevei kurota masutukesi?
Zvinorevei kurota nhunzi?
Zvinorevei kurota rufu?
Zvinorevei kurota munhu akafa?
Zvinorevei kurota mari nemari?
Zviroto zvinotanga naN
Zvinorevei kurota nhamba?
Zvinorevei kurota uchishambira?
Zvinorevei kurota vana?
Zvinorevei kurota chando?
Zviroto zvinotanga naO
Zvinorevei kurota goridhe?
Zvinorevei kurota pamusoro pemafungu mahombe?
Zvinorevei kurota ouija?
Zviroto zvinotanga naP
Zvinorevei kurota denda?
Zvinorevei kurota inda?
Zvinorevei kurota dziva rekushambira?
Zvinorevei kurota imbwa?
Zvinorevei kurota hove kana hove?
Kurota kuti urikutandaniswa kana kudzingirirwa
Zvinorevei kurota mapurisa?
Zvinorevei kurota hangaiwa?
Zvinorevei kurota chingwa?
Zvinorevei kurota uchirumwa nembwa?
Zviroto zvinotanga naR
Zvinorevei kurota mbeva?
Zvinorevei kurota nezvehembe?
Zvinorevei kurota matoto nematatya?
Zvinorevei kurota wachi?
Zvinorevei kurota makonzo?
Zvinorevei kurota rwizi?
Zviroto zvinotanga naS
Zvinorevei kurota ropa?
Zvinorevei kurota uchiba?
Zvinorevei kurota zombies?
Zviroto zvinotanga naT
Zvinorevei kurota mashark?
Zvinorevei kurota nzombe?
Zvinorevei kurota nezve tsunami?
Zvinorevei kurota kudengenyeka kwenyika kana kudengenyeka?
Zvinorevei kurota ingwe?
Zvinorevei kurota tarantulas?
Zvinorevei kurota hamba?
Zvinorevei kurota ivhu?
Zvinorevei kurota chamupupuri nechamupupuri?
Zviroto zvinotanga naV
Zvinorevei kurota nezvekufamba kana kufamba?
Zvinorevei kurota pamusoro pemombe?
Zvinorevei kurota gomo?
Zvinorevei kurota uchibhururuka kana kubviswa?
Zvinorevei kurota hembe yemuchato?
Zvinorevei kurota uchirutsa?
Zvinorevei kurota nemampires?
Pane imwe nguva takarara, tinoenda parwendo runonakidza kuratidza zvido zvedu uye kutya. Maawa ekuzorora anova nzendo kumatambudziko ezuva nezuva, kune izvo zvinonetsa zvinopinda mupfungwa dzedu, uye nekudaro zvakakosha kuti tinzwisise kududzira hope kujekesa zvarinoreva.
Yepamutemo kurota duramazwi: kududzira hakuchazove chakavanzika kwauri
Munguva dzekare, tsika dzakaedza kufunga kuti dudziro yehope imwe neimwe, imwe kubva kune yakavanzika uye esoteric nzira, asi vamwe vakatevera nzira yesainzi Ndokunge, sekune chero hupfumi, paive nevanyengeri vane mukurumbira uye vezvepfungwa.
Zvese zvinoitika mukuziva kwedu patinenge tichirota zvinogona kushandira kugadzirisa kusahadzika kwakawanda kwatisingakwanise kududzira panguva yekumuka. Zvichida ichi ndicho chikonzero nei vanhu vapedza mazana emakore vachitsvaga zvavanoreva ku ziva zvese nezve pfungwa uye hunhu hwako.
Gadzira dudziro yehope uye uone kuti zvinorevei
Isu tine zviroto zvekufananidzira here? Sei vachimiririra vavariro uye kutya kwedu? Nei kusaziva kuchigadzira pfungwa dzisingachinjiki? Dzimwe nguva tinogona kushamiswa nekuoma kwechiroto. Tinorota tichipererwa nebasa, kuti nhengo yemhuri inofa kana kuti isu tinoparadzana nemumwe wedu. Ndokunge, ivo vari hope dzine chekuita nenharaunda yedu, uye dzimwe nguva zvinoita kunge zvechokwadi zvekuti tinotsvaga zvinoreva shoko rekurota ratinotumirwa necnccious. Kana iwe uchida kutsvaga maitiro ekuita dudziro chaiyo yezviroto zvako tinya apa.
Dudziro vs zvinorehwa nehope
Kuziva chirevo chechiroto hakuna kufanana nekuchidudzira. Kuti uzive kududzira nenzira kwayo hapana hope, haufanire kungoziva zvarinoreva chete, asi unodawo kuziva zvimwe zvakakosha uye mamiriro acho ezvinhu mazviri zvinoitika, sezvo chirevo chimwechete chehope chinogona kuve nedudziro dzakasiyana dzakasiyana muvanhu vakasiyana nekuti zvinokanganisa zvinoreva izvo zvinoreva zvichienderana nenzira yako yekuve, mhuri yako, nharaunda yako, mamiriro ako erudo, hutano hwako kana kunyangwe mamiriro ako emari. Semuenzaniso, haina kufanana kurota goridhe kana uri mupfumi kupfuura kana uri murombo. Pakupedzisira kurota kwakafanana, asi dudziro yacho yakasiyana zvakanyanya.
Dudziro yeDoto muAkare
MaGreek vanga vatofarira nyaya iyi. Asi panguva iyoyo, maitiro ake ekuyedza kududzira zviroto aidzorwa netsika nemuromo. Ndokunge, iwo ese iwo mazano akapfuudzwa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa uye kwechikamu chikuru, yaive iyo kuda kwevamwari zvakaonekwa kuhope idzodzo.
Asi kune rimwe divi rekutenda uku, vanyori vakaita senge muzivi Plato kana Aristotle Ivo vakanyorawo maonero avo nezvenyaya iyi mumabhuku akadai seRepublic yekutanga uye Nezve Kurota kweyechipiri. Pasina kukanganwa izvo, imwe nguva gare gare, Pythagoras akataura zvakare nezvenyaya iyi senzira yekutaurirana yezvisikwa. Nepo vaStoiki vachibhejera kupa Gare gare kwaizouya mafungiro matsva aCicero kana Artemidoro.
Chii chiri kurota?
Kuedza kufungidzira zviri kuitika zvakatikomberedza, uye kuburikidza nehope, kunonzi kurota. Asi zviroto chete, nekuti pakange paine zviroto zvaibatanidzwa, zvainzi dhiabhori akavazivisa uye vaive vasina kukodzera kuongororwa. Ichokwadi kuti kunyangwe paine dzidziso dziripo, izvi nzira yekuuka, yakavakirwa pazvidzidzo zvaSigmund Freud.
Psychoanalysis uye kududzirwa kwaFreud
Mimwe yemifungo kana zvidzidzo zvaizouya naFreud zvaitova nehurongwa hwazvo mune izvo zvatichangobva kutaura. Ndokureva, vangadai vasina kuverengera, nekuti tsika dzaivapo kwazvo mavari. Asi, kunyangwe iri izwi rakaoma kuongorora, zvinofanirwa kutaurwa kuti Freud akauya kuzoisa poindi ndokutevera. Ini ndaida kuratidza izvozvo zviratidzo zvinoratidzwa muchirotoIvo vaive vane hukama nepfungwa dzedu uye nekusaziva.
Neichi chikonzero, kana tichiongorora hope, isu tinofanirwa kutora ese mazano uye mazano atinoona mariri uye kwete kugara neako chete. Kana kugona zvemashura kana kududzira kwerudzi rwekuita zvinowedzerwa. Iwo maratidziro nehukama nehupenyu hwedu hwezuva nezuva zvichave zvakare zvakakosha zvikuru. Pakati pezvose zviroto, Freud akapa zita rekuti 'chaiwo maroto' kune avo vanodzokorodza zvakanyanya kwatiri. Semuenzaniso izvo zvine chekuita nerufu kana kudonha. Sezvo vese inogona kuunza gakava remukati. Muchidimbu, akataura kuti kurota inzira inoenda mukati medu uye kune kwedu kwakavanzika zvishuwo.
Iyo yekuongorora psychology yaCarl Jung
Kana isu takadzidza Freud, ichokwadi kuti hatisi kuzokanganwa Jung futi. Akanga akavhiringidzikawo nepfungwa dzekutanga, asi chiremba wepfungwa weSwitzerland akaenderera mberi. Zvakare kutaura, zviroto kwaari zvaive chigadzirwa chehunhu. Mazuva ese aiona muvarwere vake matambudziko ekunyengera pamwe nekuona zvisipo uye izvi zviroto zvaive nemabhurasho akajairika kune vamwe ngano nyaya.
Saka ipapo akaona kuti pakanga pasina nguva dzose hukama chaihwo nezvakararama kana kunzwa nemunhu. Ndokusaka akaitumidza kuti seboka risingazivi. Zvese izvi zvichave mhando yehunhu hunhu hunogarwa nhaka nevanhu uye hunogona kutsanangurwa senge archetypes kana mamwe maitiro ehupenyu. Saka muchidimbu, izvo Jung zvaaida kuratidza ndizvozvo hope dzine zvadzinoreva kubva pane zvatinoona uye vangave zambuko kune zvido zvemweya.
Duramazwi kududzira zvinoreva zviroto
Kunyangwe chikamu chakanaka chehope chinotongwa nekuzviisa pasi, pane zvakawanda zvinhu zvine chirevo chakanyatso tsanangurwa. Kuongorora kwehunyanzvi kwezvinhu izvi kwakashanda kuunganidza rese data mu duramazwi reroto, bhuku iro chero munhu anogona kududzira rake.
Kana iwe uchifarira tsvaga zvinorehwa nehope, nzwisisa zvavanomiririra uye zviratidzo zvavo, neduramazwi redu reroto unogona kunyudza ruzivo rwese mahara. Iwe uchazozviziva iwe zvirinani kuburikidza nemameseji ehana yako uye iwe uchazoziva kududzira kwako kunetseka kwechokwadi. Vhura chirevo-suenos.com iwe unozogona kusvika pakadzika nhanho dzekunongedza kwako pachako uye nekuvandudza kwemweya nekutsvaga zvarinoreva.
Ini ndinonzi Nacho Zarzosa uye ini ndiri munhu kuseri kwewebhusaiti ino. Ndine degree mune psychology kubva ku Ruzivo rwePsychology yeYunivhesiti yeOviedo uye ane shungu kwazvo nezve zvinoreva hope uye psychoanalysis. Unogona kuona ruzivo rwese nezvangu clicking here.
Ndeapi matanho ekurara
Kuziva imwe neimwe yezvikamu zvakasiyana zvehope kunogona kutibatsira zvakanyanya kuti tive nekurara kunonakidza uye kuzorora zvirinani. Ichi chinhu chinokanganisawo zvakanyanya mune izvo zvatinorota, saka kuziva zvikamu zvakanaka kunokosha.
Chikamu I: chiveve nhanho
Iri danho rekutanga uye rinosanganisira iyo Kutanga maminetsi gumi ekurara, kubva patinenge tiri munguva yekumuka kusvika tazoti totsumwaira.
Chikamu II: kureruka kurara nhanho
Chikamu chechipiri chehope chine nguva ingangoita hafu yenguva yekurara uye ndiwo nhanho umo muviri wako unodzima zvishoma nezvishoma kubva kunharaunda panguva imwe chete kurova kwemwoyo uye kufema kunononoka inova yakadzikama uye zvakanyanya kusununguka. Muchikamu chino zvakatiomera kuti timuke, asi kunyangwe zvakadaro muzvikamu zvedu zvehuropi zvehukuru hwehuropi hunochinja nezvimwe zvidiki. Kazhinji patinomuka kubva muchikamu chino tinowanzozviita nenzira inovhundutsa, semuenzaniso patinorota kuti tinogumburwa kana kuwira padombo.
Phase III: shanduko nhanho
Chikamu chechitatu ndicho chipfupi pane zvese, chinogara kwemaminetsi maviri kana matatu uye chi shanduko pakati pekurara kwekureruka uye yakadzika hope chikamu.
Chikamu IV: rakadzika hope danho
Chikamu chakadzika chehope chinogara kwe20% yehope dzese uye ndicho chakakosha kupfuura zvese nekuti chinogadza mhando yekuzorora uye kugona kwemuviri kupora kubva pakuneta kwezuva. Iyo yekufema mwero yakadzika kwazvo uye nemoyo wekumanikidza unodonha zvakanyanya, saka zvakare zvakaoma kwazvo kuti isu timuke zvakasununguka kubva muchikamu chino.
REM yekurara chikamu
Chikamu chehope cheREM chinotora 25% yehope dzedu. Zita rekuti REM rinobva kuRapid Eye Movement muChirungu uye zvinoreva izvo maziso anogara achifamba pasi pemaziso. Basa rehuropi panguva ino rakanyanya kukwirira, padanho rakaenzana nepatinomuka asi panguva imwe chete tsandanyama dzakavharwa kutitadzisa kupindura kune ruzivo rwese urwo uropi hwedu huri kugadzirisa. Munguva yechikamu ichi hope dzinoitika saka ndicho chikamu chakakosha kwazvo chekutarisa pane ino webhusaiti.
Haasi ese maroto akaenzana zvakaenzana, kune zviroto izvo vanhu vazhinji vanotambura, semuenzaniso ndorota mudhara wako kana kunyange hope dzekudzokera kuna ex wako futi, kurota nezvemvura, kurota pamusoro petsvina, kurota uchibhururuka, kurota pfuti dzichirira o kurota uchiwira mukushaikwa. Nepo mamwe ari mashoma se kurota nezve mapurisa. Iva nehope dzakajairika kana yeirder imwe haigone kududzirwa seyakajeka kana isina kunaka. Saizvozvowo, kurota kwakadzikama mune mumwe munhu kungave kwakajairika mune mumwe. Zvakafanana, semuenzaniso, kurota nezvemapurisa kwakajairika kana basa rako riine hukama nemapurisa, sekunge iwe unoshanda mubhangi kana muchipatara.
Zano rekurangarira hope zvakanaka
Unoda here kurangarira zvakanaka zvese zvakanyorwa pakurota kuitira kuti gare gare uwane zvarinoreva? 'Ndinokurudzira kuti uise bepa nechinyoreso kunyora zvese izvo zvaunorangarira kubva kuhope dzako iwe uchangomuka. Rangarira kuti chero dhata rinoverengwa, sezvo zvichigona kureva zvakawanda kana uchidudzira nemazvo. Gare gare, paunopedza zuva rako, pinda duramazwi rako uye dzidza zviratidzo zvechimwe nechimwe chinhu kuti unzwisise zviri nani.
Nenzira iyi, iwe unowana kwete chete iyo hope nezvadzinoreva, asi unogona kudzidza Zvinorevei kurota inda kana the zvinoreva kurota nezvemapete, pamwe neiyo kududzirwa uye zvinoreva kurota nezvemari uye uwane zvakavanzika zvakachengetwa mukudzika kwepfungwa dzako. Kubva ikozvino zvichienda mberi, iwe hausisina chikonzero chekuongorora zvinorehwa nehope uye kuti ugozviziva iwe zvishoma zvirinani manheru ega ega.
Nzira yekududzira hope
© 2022 | zvinoreva-suenos.com: duramazwi repamutemo reroto & dudziro | NaNacho Zarzosa